Teatra sy ny iray volan’ny teny Malagasy Hiantsehatra etsy Andavamamba ny Sakaizan’ny Teatra LJJR
Trano koltoraly Malagasy In-droa miantoana ny taom-baovao amin’ity taona 2019 ity
Hiavaka ny fanomanana ny taom-baovao Malagasy ho an’ny trano koltoraly Malagasy sy ny fikambanana Fitohasina ary ny fivondronan’ireo mpitazona ny hasin’ny tany sy ny fomban-drazana manerana ny Nosy amin’ity taona 2019 ity.
Kitoatoa amin’ny fikitihana ny Rova “Mampianjera fitondrana sy mahafolaka an-datony”
Ny 27 janoary taorian’ny fotoam-pivavahana nataon’ny Fiadidian’ny Repoblika notarihin’ny filoha sy ny teo anivon’ny governemanta no nilazan’ny filoha ankehitriny Andry Rajoelina fa hatao izay hahavitan’ny Rovan’i Manjakamiadana hatramin’ny volana jona 2020.
Mpanakanto malagasy Tsy apetraka amin’ny toerany, hoy H – Sean
Azo lazaina ho mpanakanto mbola tanora herotrerony eo amin’ny sehatry ny mozika i Hasina Andriantsarafara Raveloson na H – Sean, tovolahy vao 26 taona monja.
Tetikasa Zavamanitra Tontosa tao Fandriana ny “Soa Ifampizarana”
Tontosa ny talata 22 janoary 2019 ny fampahalalana ny “Soa Ifampizarana”, tetikasa iray izay ao anatin'ny “Tetikasa Zavamanitra”, any amin'ny Distrika Fandriana.
QUATUOR SQUAD Hiseho an-tsehatra etsy amin'ny AFT Andavamamba
Hampianoka ny mpankafy azy ireo ny hakanton’ny feon-dokanga etsy amin’ny AFT Andavamamba ny 25 janoary ho avy izao manomboka amin’ny 6 ora sy sasany ny tarika Quatuor Squad.
Teatra Malagasy Feno 90 taona amin’ity 2019 ity ny Tropy Jeannette
Feno 90 taona katroka amin’ity 2019 ity ny tropy teatraly Malagasy “Tropy Jeannette” izay niforona tamin’ny taona 1929.
Tarika Spesialista Hamoaka hira vaovao betsaka mihetsiketsika
Mitondra zava-baovao ny tarika Spesialista, tarihin-dRandrianasolo Hugues amin’izao fiandohan’ny taona vaovao 2019 izao.
Amin'ity volana jona ity izay ao anatin'ny iray volana ho fanandratana ny teny Malagasy dia hiaka-tsehatra ao amin’ny Hall AFT Andavamamba ny alahady 03 jona tolakandro ny Sakaizan'ny Teatra ao amin'ny Lycée Jean Joseph Rabearivelo
izay nampiofanin’i Mbato Ravaloson ny filalaovana teatra efa ho telo taona lasa izay, nanomboka tamin'ny taona 2016. Ny LOVASOA na BEL HERITAGE izay fiantsana ny tononkalo nosoratan'i Jean Joseph Rabearivelo amin'ny teny malagasy sy amin’ny teny frantsay sy teny Espaniola no holalaovina amin’izany. Entina mandravaka ny antsan-tononkalo ireo "Hiranay Omaly" izay tononkiran'i Jean Joseph Rabearivelo ny sasany amin'ireny. Eo ihany koa ny filalaovana ny fizarana faharoa ny tantara fisehatra " Imaitsoanala ". Marihina moa fa ny Imaitsoanala no Opéra malagasy voalohany, izay Andrianary Ratianarivo no nanao ny feony. Saingy tsy Opéra no hilalaovana azy fa teatra. Ny Sakaizan'ny Teatra Malagasy sy Frantsay miaraka amin'ny antoko mpihira ao amin'ny LJJR no hanatontosa ny fampisehoana, ary ho avy ao koa hanampy azy ny maintimolalin'ny Lycée vitsivitsy mpikalo ny hiranay omaly.